I-Umpires Nest, The Retreat at Nail Bay, BVI's - I-Airbnb
I-Umpires Nest, The Retreat at Nail Bay, BVI's
Nail Bay, Virgin Gorda, i-British Virgin Islands
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Leesa
U-Leesa uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-Umpires Nest izoqashwa isikhathi eside kodwa i-Sea La Vie isanda kulungiswa futhi ifana ncamashi. Sibheke ngabomvu ukukwamukela.
Izwa ukuzola kwe-Nail Bay, izindawo zayo ezisezingeni lomhlaba namabhishi, kuyilapho uhlala efulethini lethu likanokusho.
Khumula, nikeza amandla, buyisela, ugqugquzeleke okukuzungezile noma uthole i-adrenalin yakho impompa ngeklabhu yezemidlalo ehlome ngokuphelele, ukugijima kwezintaba kanye nemidlalo yamanzi ethokozisayo; ukusuka ku-snorkel ebabazekayo phezu kwe-coral reef kuya ku-surf ye-kite ejabulisayo...
I-Retreat e-Nail Bay inezindlu ezimbili ezinhle kakhulu zokulala; I-Sea La Vie kanye ne-Umpires Nest.
• Igumbi lokulala lenkosi eline-ensuite evulekile
• Ikhishi eligcwele
• Igumbi lokuphumula elinethezekile eline-smart TV engu-50'
• Indawo yokudlela evalekile enokubukwa olwandle nendawo eningi yokumema abangani esidlweni sakusihlwa
• Igumbi le-Spa esizeni elinikeza imenyu ye-Spa egcwele 'nge-Spa & Sparkle BVI'
• Ubulungu obugcwele 'e-Nail Bay Sports Club' buzofaka phakathi; I-swimming pool, inkundla yethenisi, inkundla ye-squash, i-Table Tennis kanye ne-Gym
• Indawo yokudlela yomoba ivulekele Isidlo sasemini nesakusihlwa
• Igumbi ngalinye linokubukwa kolwandle ngaphandle kweSir Francis Drake Channel kanye neziqhingi ezingomakhelwane ze-BVI
Ingxenye engcono kakhulu yosuku ukushona kwelanga okumangalisayo, okuhambisana ne-cocktail yakho oyithandayo, ngeke ufune ukuhamba!
Izithombe zangaphakathi ziyeza maduze, ukulungiswa kuzophela ngenyanga ezayo.
Okwamanje, sicela ujabulele ukubukwa!
I-Retreat, incikene nendawo entsha ye-Nail Bay Sports Club kanye nendawo yokudlela yomoba.
I-Lush Gardens izungeze amafulethi kanye nemibono evela kuwo wonke amagumbi kanye nethala elibheke kuSir Frances Drake Channel kanye neziqhingi ezingomakhelwane zaseBritish Virgin. Kunamabhishi ama-2 amahle ngaphakathi kwamayadi angama-250, eliseduze kakhulu yi-Mountain Trunk, lapho ungazulazula khona izixhobo zamakhorali ezimangalisayo, i-Kayak, i-Paddle board noma umane ucwilise ukukhanya kwelanga okufudumele. Mhlawumbe thatha izihlalo ze-hamper kanye ne-beach sekwephuzile ntambama futhi ujabulele ukushona kwelanga okumangalisayo kwe-BVI!
U-Leesa uzokweluleka mayelana nokudluliswa kwemali usuka noma uye esikhumulweni sezindiza noma idokodo kanye nokuma kwesakhiwo nendawo esizungezile.
Ungakwazi ukuhlela ukunikezwa kwangaphambi kokufika ukuze ube nezinto zakho ezibalulekile kusukela ngesikhathi ufika ngaso.
Amatekisi, Ukuqasha Imoto, Uhambo, Imisebenzi, Ukubhukha etafuleni noma mhlawumbe umpheki ozimele? Konke kungahlelwa ngaphambi noma uma ufika.
Ukukhanya okuhambayo? Singahlela ukuthi ube nezinto zakho zangasese ezikulindile, okuhlanganisa izinto eziphephile zamatshe, izikrini zelanga zemvelo ezenziwe ngu-Coola kanye nemikhiqizo yeshawa ephilayo eyenziwe ku-BVI ngabakwaSageroots kanye ne-EC Soap co. Okudingayo ukuqhubeka kwakho!
Ungakwazi ukuhlela ukunike…